China Butterfly Valve ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများ - Allway Valve
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Butterfly Valve
Allway သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် China butterfly valve ထုတ်လုပ်သူများနှင့် China butterfly valve ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဆို့ရှင်လုပ်ငန်းကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့ပြီး ရင့်ကျက်မှုဆီသို့ တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၆ နှစ်အတွင်း ဝန်ထမ်း ၂၀ မှ ၂၀၀ နီးပါး တိုးလာခဲ့သည်။ အမှန်တကယ် တပ်ဆင်ပြီးနောက် အာမခံကာလအတွင်း အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အစားထိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအရ ပိုက်လိုင်းဒီဇိုင်းဖြင့် ဖောက်သည်များအား ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
Butterfly valve ကို flap valve လို့လည်းခေါ်ပါတယ်၊ သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေကတော့-
ကြီးမားသောလည်ပတ်မှုစွမ်းရည်, တူညီသောလုပ်ရည်ကိုင်ရည်နှစ်ခုထိုင်ခုံအဆို့ရှင်၏ 1.5 ~2ကြိမ်ခန့်;
B. အထူးသဖြင့် ကြီးမားသော လုပ်ရည်ကိုင်ရည်တွင် စျေးနှုန်းနိမ့်သည်။
C. Resistance loss သည် သေးငယ်ပြီး အရည် ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ ဖိအား လျော့သွားသည်၊
D. အနည်များသည် စုပုံရန်မလွယ်ကူပါ။
E. ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တပ်ဆင်နေရာငယ်။
Butterfly valve တွင် မူရင်းဒီဇိုင်း၊ လက်ရာမြောက်သော နည်းပညာ၊ ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ ပါ၀င်ပြီး ISO9001 နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ကောင်းစွာရောင်းချလျက်ရှိပြီး ရေပေးဝေရေးနှင့် ရေနုတ်မြောင်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလျက်ရှိသော နိုင်ငံများစွာသို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဓာတ်ဆီဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ သတ္တုဗေဒနှင့် အခြားရောင်းဝယ်ရေး။
Pneumatic Actuator ဖြင့် Eccentric Butterfly Valve
Pneumatic actuator နှင့်အတူ eccentric butterfly valve သည် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးသော၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး အထက်လေဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတွင် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး၊ solenoid valve ငါးခုနှစ်ခုကို ထိန်းချုပ်ပြီးနောက် လည်ပတ်မှုအဆင်ပြေပြီး flow medium ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးများသည်။
Eccentric Butterfly Valve သည် Electric Actuator ပါရှိသည်။
eccentric butterfly valve with electric actuator with good fluid control, it isaimportant execution unit of the field in industrial automation control. ၎င်းသည် အဆင်ပြေသော butterfly valve နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး လျှင်မြန်စွာ အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်ပြီး လည်ပတ်ရလွယ်ကူသည်။ အဓိကအားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သောပိုက်လိုင်း flow. Pressure နှင့်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု။
Flange eccentric butterfly valve ကို hard seal နှင့် soft seal ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားပြီး soft seal ကို low and medium pressure medium တွင် အသုံးပြုကြပြီး hard seal ကို မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် high pressure medium တွင် အဓိက အသုံးပြုပါသည်။ Butterfly valve သည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော တည်ဆောက်ပုံ၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်၊ အကန့်အသတ်မရှိ၊ space နှင့် flow direction အားဖြင့် မည်သည့် ဦးတည်ချက်ဖြင့်မဆို တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။
Wafer Eccentric Butterfly Valve
Wafer eccentric butterfly valve တွင် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစားနှင့် ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်သာပါဝင်ပါသည်။ 90° လှည့်ရန်သာလိုအပ်ပြီး လျင်မြန်စွာဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်သည်၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုရှိပြီး valve သည် ကောင်းမွန်သောအရည်ထိန်းလက္ခဏာများရှိသည်။
ကာဗွန်သံမဏိ Offset Butterfly Valve
ကာဗွန်သံမဏိ offset butterfly valve သည် ရော်ဘာထိုင်ခုံနှင့် သတ္တုမာကျောသောထိုင်ခုံဖြစ်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်း၊ ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပေါ့ပါးသော၊ အမြန်အဖွင့်နှင့်အပိတ်ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သောလည်ပတ်အားအား၊ အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု၊ လုပ်အားခြွေတာမှုနှင့် လက်သွက်မှုတို့ဖြင့်၊ ၎င်းကို မည်သည့်အနေအထားတွင်မဆို တပ်ဆင်နိုင်ပြီး၊ အဆင်ပြေသောထိန်းသိမ်းမှု။
သတ္တုထိုင်ခုံ Eccentric Butterfly Valve
သတ္တုထိုင်ခုံ eccentric butterfly valve သည် ယိုစိမ့်မှု သုည၊ မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် ဖိအားခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပိုမိုပြင်းထန်သော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစေရန်၊ ၎င်းသည် ကိုယ်တိုင်တိုးတက်မှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။ valve ၏ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ၏ ပုံဆောင်ခဲအဖြစ်၊ သတ္တုထိုင်ခုံ၊ eccentric butterfly valve ကို အသုံးပြုသူများနှင့် ဒီဇိုင်နာအများစုမှ ပိုမိုအာရုံစိုက်လာမည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Allway Valve ဟုခေါ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးမြင့် Butterfly Valve သည် စျေးပေါသော ကုန်ပစ္စည်းကို ရယူလိုသူများအတွက် ရေပန်းစားပါသည်။ Quotations များနှင့် စျေးနှုန်းစာရင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသော လက်ကားပစ္စည်းများလည်း ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှစျေးနှုန်းချိုသာစွာဝယ်ယူရန်စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ပြည်တွင်းပြည်ပမှမိတ်ဆွေများနှင့်ဖောက်သည်များကိုကြိုဆိုပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဆအနိုင်ရရှိနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။